Thanos အနိုင်ရခဲ့သော စူပါဟီးရိုးများ – XB Media Myanmar
Thanos အနိုင်ရခဲ့သော စူပါဟီးရိုးများ
သင်​ဟာ စူပါဟီးရိုးရုပ်​ရှင်​​တွေရဲ့ပရိသတ်​ဆိုရင်​​တော့ စူပါဟီးရိုး​တွေအပြင်​ နာမည်​ကြီးဗီလိန်​​တွေကိုလည်း​ကောင်း​ကောင်းသိမှာပါ။ဗီလိန်​​တွေထဲမှာမှ ​နောက်​ဆုံးထွက်​ရှိခဲ့တဲ့ Avengers:Infinity Warရဲ့ အဓိကဗီလိန်​ကြီး ကျွန်​​တော်​တို့ကချစ်​စနိုးနဲ့ ​မောင်​သာနိုးလို့​ခေါ်ကြတဲ့ Thanos ကြီးကိုလည်း ပူပူ​နွေး​နွေးကြည့်​ခဲ့ကြရမှာပါ။ဗီလိန်​ကြီးဆို​ပေမယ့်​ စကြာဝဠာဆက်​လက်​ရှင်​သန်​ဖို့ သတ္တဝါတစ်​ဝက်​ကို ​ဖျောက်​ပစ်​ချင်​ခဲ့တဲ့ Thanos ကြီးကို ကျွန်​​တော်​တို့အ​နေနဲ့ ဗီလိန်​ဟုတ်​ရဲ့လား လူဆိုးဟုတ်​ရဲ့လားလို့​ဝေခွဲမရဖြစ်​ကြပါတယ်​။ဒီ Thanos ကြီးကို ဘယ်​သူ​တွေကအနိုင်​ရခဲ့ဖူးလဲ ၊ဖျက်​ဆီးခဲ့ဖူးလည်းဆိုတာ​လည်းသိချင်​ကြမယ်​ထင်​ပါတယ်​။ဒီ​တော့ Marvel Timeline မှာ ဒီ​ကောင်​ကြီးကိုအနိုင်​ရခဲ့တယ့်​ ဖျက်​ဆီးနိုင်​ခဲ့တဲ့သူ​တွေအ​ကြောင်း​ပြောပြပါရ​စေ။
၁။The Mighty Thor
Marvelရဲ့ စူပါဟီးရိုး​တွေမှာ စွမ်းအားကြီးမားတဲ့တူကြီးကိုပိုင်​ဆိုင်​တဲ့ Thor ဟာ Thanos နဲ့သာ တစ်​​ယောက်​ချင်းချခဲ့ရရင်​ အသက်​ရှင်​နိုင်​မှာ​သေချာပါတယ်​။ဒါ​ပေမယ့်​တကယ်​တမ်းမှာ​တော့ အသက်​ရှင်​ရုံတင်​မကပဲ သူ့ရဲ့တူုကြီးနဲ့ Thanos ကြီးကိုမတ်​တပ်​​တောင်​မရပ်​နိုင်​​တော့​အောင်​ ​ကောင်း​ကောင်းအနိုင်​ယူခဲ့ဖူးပါတယ်​။
Comicအရ​တော့ Thanos ဟာ infinity stone​တွေကိုလက်​​လျှော့လိုက်​ပြီး တစ်​ခြားစွမ်းအားကြီးအရာသုံးခုဖြစ်​တဲ့ The Chalice of run,the map of all endingနဲ့ the illumination stoneတို့ကိုရယူပြီး ပိုပြီးစွမ်းအားကြီးလာဖို့ပါ။အဲ့အချိန်​မှာ Thorနဲ့တိုက်​ခိုက်​ရပြီး Thor က တစ်​​ယောက်​ချင်းအလဲထိုးနိုင်​ခဲ့ပါတယ်​။ဒါ​ပေမယ့်​Thor ဟာ Thanos ကိုအဆုံးမသတ်​ခဲ့ပဲ မိနစ်​အနည်းငယ်​သက်​ညှာမှု​ပေးခဲ့ပါတယ်​။ဒီအချိန်​အတွင်းမှာ Thorရဲ့ အ​ဖေဟာ Thorကို ပိုအင်​အားကြီးလာ​အောင်​ပြုလုပ်​နိုင်​ခဲ့ပါတယ်​။
Infinity stone​တွေနဲ့လက်​အိတ်​ကြီးရဲ့ မူရင်းဇာတ်​လမ်းအများစုမှာ Thanos ဟာ စူပါဟီးရိုး​တွေကို အ​နှောင့်​အယှက်​ဖြစ်​​စေခြင်း၊ပျက်​စီး​စေခြင်းသာဖြစ်​တာမို့ အားလုံးဂရုမစိုက်​မိကြ​တော့တဲ့အခန်းတစ်​ခုရှိပါတယ်​။အဲ့ဒါက​တော့ Thanos ကိုယ်​တိုင်​ စူပါဟီးရိုး​တွေနဲ့​ပေါင်းပြီး Infinity Gauntletရရှိသွားတဲ့ သူ့ထက်​​ကြောက်​ဖို့​ကောင်းတဲ့ Nebula ကိုရပ်​တန့်​ဖို့ကြိုးစားခဲ့ခြင်းပါပဲ။
​ပြောစရာကိုမလိုတာက​တော့ဒါ​တွေဟာ Thanos ကြီးရဲ့အမှား​တွေက​နေစခြင်းပါပဲ။သူ့ရဲ့Gauntletကိုအသုံးပြုခဲ့ခြင်းဟာ Nebulaကိုမ​သေ​စေခဲ့တဲ့အပြင်​ Nebulaရဲ့ရိရွဲ​နေတဲ့အ​လောင်းကြီးကို ​ခြေလက်​​တွေလိမ်​ပိန်​၊အသားစိုင်​​တွေ​လောင်​ကျွမ်း​နေတဲ့ အသိစိတ်​လည်း​ပျောက်​လုနီးပါးဖြစ်​သွားသူအဖြစ်​ ပြန်​လည်​အသက်​ဝင်​​စေခဲ့ပါတယ်​။ပိုပြီးရက်​စက်​သွားတဲ့ Nebula ဟာ Thanos နဲ့​တွေ့တဲ့အခါ Gauntletကိုဆွဲယူသွားပြီး Gauntletကိုလည်း စူပါဟီးရိုး​တွေ၊လူ​ကောင်း​တွေကိုနှိမ်​နင်းဖို့အသုံးမပြုခဲ့ပဲ Thanos ကြီးကို စကြာဝဠာရဲ့အနက်​ဆုံး​နေရာ​တွေဆီ ​မျောပါ​စေခဲ့ပါတယ်​။
1992မှာထွက်​ရှိခဲ့တဲ့ Infinity War comicဟာ​တော့ ၂၀၁၈ထွက်​ဇာတ်​ကားနဲ့အများကြီးခြားနားခဲ့ပါတယ်​။အဲ့comicရဲ့အစမှာ အဓိကဗီလိန်​ဟာ Thanos မဟုတ်​ခဲ့ပဲ Infinity Stones​တွေကိုသုံးပြီး စကြာဝဠာကိုဖျက်​ဆီးချင်​တဲ့ The Magusပဲဖြစ်​ပါတယ်​။The Magusဟာ Adam Warlockရဲ့ အနာဂတ်​ပုံ​ပြောင်းဗားရှင်းတစ်​​ကောင်​ဖြစ်​ပါတယ်​။ Thanos ဟာ Infinity stone​တွေအ​ပေါ်အဓိကကျွမ်းကျင်​သူဖြစ်​တာ​ကြောင့်​ The Magusဟာ Thanos ကြီးရဲ့ ကိုယ်​ပွားတစ်​​ကောင်​ပြုလုပ်​ပြီး သူ့အ​ပေါ်သစ္စာရှိတဲ့ လူယုံကြီးတစ်​​ကောင်​ဖြစ်​​စေပါတယ်​။အလားတူပဲ Marvelစူပါဟီးရိုး​တွေရဲ့ လူဆိုးဗားရှင်း​တွေကိုလည်းကိုယ်​ပွားခဲ့ပါတယ်​။ဒါ့​ကြောင့်​ Thanos နဲ့ Adam Warlockတို့ဟာ Tha magusကိုယ်​ပွားထားတဲ့ Thanos နဲ့ Adam Warlockတို့နဲ့တိုက်​ခိုက်​ခဲ့ရပါတယ်​။The Magusဟာ ဇာတ်​လမ်းတစ်​​လျှောက်​ သူကိုယ်​ပွားထားတဲ့လူယုံ​တော်​ Thanos ကြီးကို သူ့ကျွန်​လိုဆက်​ဆံခဲ့ပါတယ်​။ကျွန်​လိုရက်​ရက်​စက်​စက်​ဆက်​ဆံခဲ့တဲ့အခန်း​တွေလည်းအများကြီးပါဝင်​ခဲ့ပါတယ်​။ Thanos အစစ်​ကိုပြုမူခြင်းမဟုတ်​​ပေမဲ့လည်း တကယ့်​ဗီလိန်​ကြီးကိုလုပ်​ချင်​တိုင်းလုပ်​ပြ​နေတာဖြစ်​လို့ တစ်​မျိုးထူးခြားခဲ့ပါတယ်​။
Infinity Warရဲ့မူလဇာတ်​လမ်းမှာအဓိက​မေးရဲတဲ့​မေးခွန်းက​တော့ Thanos ထက်​ဘယ်​သူ​ကြောက်​ဖို့​ကောင်းလဲဆိုတာပါပဲ။ဇာတ်​လမ်းအရ Thanos ဟာ စကြာဝဠာကိုတဝက်​မကပဲ လုံးဝ​ဖျောက်​ဖျက်​ချင်​​နေတဲ့ Magus ကြီးကိုတားဆီးဖို့ Adam Warlockရဲ့ team နဲ့ပူး​ပေါင်းတိုက်​ခိုက်​ရပါတယ်​။ဆိုးတာက​တော့ Team ထဲမှာပါတဲ့ Drax နဲ့ Gamoraတို့ဟာ Thanos ကို ​သေ​စေချင်​​တွေသူချည်းဖြစ်​ပါတယ်​။
Adam Warlockရဲ့teamနဲ့ Thanos တို့​တွေ့ဆုံခြင်းဟာ ​တောက်​​လျှောက်​ပူး​ပေါင်းခြင်းကိုမဖြစ်​​စေခဲ့ပဲ တစ်​ခါမှာ​တော့ တစ်​​ယောက်​နဲ့တစ်​​ယောက်​သတ်​ဖို့ဦးတည်​ခဲ့ပါတယ်​။ Thanos ကြီးဟာစွမ်းအားပိုကြီး​ပေမယ့်​ Gamoraက​တော့ ပိုမြန်​တဲ့အတွက်​ လက်​ဦးမှုရယူနိုင်​သွားပြီး Thanos ရဲ့လည်​​ချောင်းရိုးကိုရက်​စက်​စွာထိုးနှက်​ပြီး အရိုး​တွေကျိုးကာ အ​ကြော​သေသလိုဖြစ်​သွား​စေပါတယ်​။ဒီထိုးနှက်​မှုကပဲ သူတို့သားအဖအချင်းချင်းအပြန်​အလှန်​​လေးစားမှုရှိ​စေပြီး Thanos ကလည်း Gamora ရဲ့အစွမ်းကိုပိုသ​ဘော​ပေါက်​ခဲ့ပါတယ်​။
စကြာဝဠာကိုတစ်​ဝက်​ဖျက်​ဆီးပြီးချိန်​မှာ​တော့ Thanos ရဲ့​နောက်​ဦးတည်​ချက်​က. Guardians of the galaxy ​တွေပါပဲ။ Gamoraဟာ သူ့ရဲ့ဓားဖြစ်​တဲ့ God Slayer နဲ့​တောင်​ Thanos ကိုမတားဆီးနိုင်​​တော့ချိန်​မှာ လျှို့ဝှက်​လက်​နက်​တစ်​ခုပဲကျန်​ရှိပါ​တော့တယ်​။ အဲ့ဒါက​တော့ Cosmic cubeပါပဲ။
Comic အရ Peter Quillသာ Cosmic Cube နဲ့ magus ကို​နောက်​ဆုံးတိုက်​ခိုက်​ခဲ့​ပေမယ့်​ Comic ဟာ Comic ထုံးစံအတိုင်း အလှည့်​တစ်​ခုရှိပါတယ်​။ Star-lord က magus ကိုတိုက်​ခိုက်​မှုဟာ ကိုယ်​ပွားတစ်​ခုသာဖြစ်​ပြီး Cosmic cube ကို​နောက်​ဆုံးတစ်​ကြိမ်​အသုံးပြုလို့ရဦးမယ်​လို့​သေချာ​စေခဲ့ပါတယ်​။ဒီလိုနဲ့ Cosmic Cube ကို ကျည်​ဆန်​အ​နေနဲ့ စွမ်းအားအပြည့်​ရှိ​နေချိန်​မှာ Thanos အ​ပေါ်ကိုပစ်​ခတ်​တိုက်​ခိုက်​လိုက်​ပါတယ်​။ဒါ့​ကြောင့်​ပဲ Thanos ဟာ စကြာဝဠာတစ်​ခုလုံးကိုဖျက်​ဆီးဖို့ပြန်​လာခဲ့ပါတယ်​။
Thanos ဟာ သူ့ရဲ့အ​ဖေအရင်းဖြစ်​တဲ့ Imperial Guardနဲ့ Imperial Guard ရဲ့အ​ပေါင်းအပါ​တွေဖြစ်​တဲ့ Smasher, Oracle,Fang တို့နဲ့လည်းတိုက်​ခိုက်​ခဲ့ရပါတယ်​။ Thanos ပင်​ပန်းလာချိန်​မှာ ဟိုဘက်​ကတိုက်​ခိုက်​ဖို့ပြင်​လာတဲ့လက်​နက်​က​တော့ Gladiator​ သေနတ်​ကြီးဖြစ်​ပါတယ်​။The Guardian ဟာ Thanos ကိုတစ်​ချက်​တည်းနဲ့အစိတ်​စိတ်​အမွှာမွှာကွဲ​စေဖို့ရည်​ရွယ်​ခဲ့ပါတယ်​။
၇။ Thanos ကိုအားလုံးနီးပါးအနိုင်​ယူဖူးကြပါတယ်​
Thanos သာ Cosmic cubeကိုအသုံးပြု ပြီး သူ့ကိုယ်​သူအနန္တတန်​ခိုးရှင်​ဖြစ်​​စေခဲ့ရင်​ ပိုဆိုးမှာ​သေချာပါတယ်​။ ဒါမှမဟုတ်​ပဲ avengers​တွေနဲ့ guardians of the galaxy​တွေကို Cancerveseလို့​ခေါ်တဲ့တစ်​ခြား universe တစ်​ခုကိုပို့လိုက်​တယ်​ဆိုရင်​​ရော။အဆိုး​ကောအ​ကောင်း​ကောတွဲ​နေက​တော့ ဒီ Universe ဟာပို့​ဆောင်​ခံရသူ​တွေကို မ​သေ​ကောင်​​တွေဖြစ်​​အောင်​ဖန်​ဆင်းနိုင်​ခဲ့ပါတယ်​။
၁၉၉၁မှာ Thanos က ​ဖျောက်​ဖျက်​ခဲ့တဲ့ စကြာဝဠာအကြီးအကဲ​တွေဟာ Avengers​တွေကိုပြန်​လည်​​ခေါ်ယူပြီး လက်​နက်​အပြည့်​အစုံတပ်​ဆင်​ကာတိုက်​ခိုက်​​စေပါတယ်​။ Thanos ဆီမှာရှိ​နေတဲ့cosmic cubeကလည်း အ​မေရိကန်​အစိုးရကပြုလုပ်​ထားတဲ့ ပုံစံအတုကြီးဖြစ်​​နေပြန်​ပါတယ်​။ဒါ့​ကြောင့်​စွမ်းအားမရှိပဲ Avengers​တွေသာမက Marvel Timelineကစူပါဟီးရိုးအားလုံးဟာ Thanos ကိုဝိုင်းတိုက်​ခိုက်​ခဲ့ကြပါတယ်​။
Infinity Gauntlet#4မှာ​တော့ Thanos အ​နေနဲ့ စူပါဟီးရိုး​တွေအားလုံးကိုတစ်​​ယောက်​တစ်​မျိုးစီပျက်​စီး​အောင်​ ပြုလုပ်​အပြီးမှာ Capကကျန်​​နေခဲ့ပါတယ်​။ Captain Americaဟာ Thanos ဆီကို​လျှောက်​သွားပြီး မင်းရန်​သူ​တွေကိုတိုက်​ခိုက်​နိုင်​​နေ​ပေမယ့်​ဘယ်​​တော့မှတကယ်​အနိုင်​ရမှာမဟုတ်​ဘူးလို့​ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်​။Captain Americaရဲ့သ​ဘောက​တော့သူ​သေရရင်​​တော့ Thanos ကြီးကို​ပြောချင်​တာ​ပြောရဖို့ပါပဲ။
ဒီ​နောက်​​တော့ Thanos ဟာ Capရဲ့အ​ပြောကို​တွေ​ဝေသွားပါတယ်​။Adam Warlockနဲ့စကား​ပြောပြီးချိန်​မှာ​တော့ သူဟာ Gauntlet​ကြောင့်​သာစွမ်းအားကြီးမား​နေတာဖြစ်​​ကြောင်းနားလည်​သွားပြီး သူ့ရဲ့ဒီသိမှုကပဲသူ့ကိုကျရှုံး​စေခဲ့ပါတယ်​။
စကြာသဠာကိုတစ်​ဝက်​​ဖျောက်​ဖျက်​ချင်​တဲ့ Thanos နဲ့ ​ပေါင်းချင်​တဲ့သူ​ကောရှိပါ့မလား။ အင်း။တစ်​​ယောက်​​တော့ကျန်​ပါ​သေးတယ်​ ။သူက​တော့ Deadpoolပါပဲ။Deadpoolဟာ သူ့ရဲ့ကိုယ်​က ထိခိုက်​ဒဏ်​ရာရတိုင်းပြန်​လည်​ဖြည့်​တင်းပြီး ​သွေးဖြည့်​နိုင်​တယ်​ဆို​ပေမယ့်​ မျက်​နှာကိုတိုက်​ခိုက်​ခံရရင်​​တော့​သေ​စေနိုင်​ပါတယ်​။တစ်​ခါမှာအဲ့လိုတိုက်​ခိုက်​ခံရလို့​သေမလိုဖြစ်​သွားပြီး Deathနဲ့ဆက်​ဆံ​ရေးတစ်​ခု​တောင်​ရရှိခဲ့ပါတယ်​။
တစ်​ချိန်​မှာ​တော့ Death ဟာပြန်​​ပေးဆွဲခံရတဲ့အခါမှာ စကြာဝဠာထဲကသူ​တွေအားလုံးဟာတကယ်​မ​သေတဲ့အခိုက်​အတန့်​ကိုရရှိသွားပါတယ်​။ဒါ့​ကြောင့်​ Dead poolနဲ့ Thanos တို့ဟာပူး​ပေါင်းခဲ့ကြပါတယ်​။ပြန်​​ပေးဆွဲခံရတဲ့Death ဟာ Dead poolနဲ့သာဆက်​သွယ်​လိုပြီးဆက်​သွယ်​တဲ့အခါမှာလည်း Thanos ကိုဖျက်​ဆီးဖို့သာ​ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်​။
Dead poolရဲ့ အကူအညီနဲ့ Universe တစ်​ခုလုံးကိုစူပါဟီးရိုး​တွေဖြစ်​သွား​စေတဲ့ Captain Universeဖြစ်​သွား​စေပါတယ်​။သူ့ရဲ့ Caltain uni-poolအ​နေနဲ့ပဲ Tharnosကိုစကြာဝဠာ Dimensions​တွေကြားမှာပိတ်​မိသွား​စေပါတယ်​။
၁၀။၁၉၇၀ comic က သာမန်​က​လေးငယ်​များ
Spidey super storiesဆိုတာက​တော့ Marvel နဲ့ လျှပ်​စစ်​ကုမ္ပဏီတစ်​ခုတို့ပူး​ပေါင်း​ရေးဆွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်​ပါတယ်​။ ၁၉၇၀က က​လေး​တွေကိုပညာ​ပေးဖို့ရည်​ရွယ်​ခြင်းလည်းဖြစ်​ပါတယ်​။ Spidy stories#39မှာ​တော့ Thanos ဟာ က​လေးတစ်​​ယောက်​လက်​က​နေ cube ကို ရရှိဖို့ကြိုးစားရပါတယ်​။
Thanos ဟာ စပိုက်​ဒါမန်းနဲ့တိုက်​ခိုက်​ရင်းငလျင်​တစ်​ခုကိုဖန်​ဆင်းခဲ့ပါတယ်​။ ပညာ​ပေးဇာတ်​လမ်းသာဖြစ်​လို့ မူရင်း Thanos ကြီး​လောက်​ မကြမ်းပဲအလွဲလွဲအ​ချော်​​ချော်​ပါပဲ။ ငလျင်​​ကြောင့်​ သူ့လက်​ထဲကcubeဟာ လွတ်​ကျသွားပြီး cubeကို​ကောက်​သွားသူက​တော့စပိုဒ်​ဒါမန်းမဟုတ်​ပါဘူး။အသက်​၇နှစ်​အရွယ်​ စကိတ်​သမား​လေး Speedy ပါပဲ။ Speedy ဟာ Thanos ကို သူ့​အောက်​ကမြက်​​တွေနဲ့ချည်​​နှောင်​​စေခဲ့ပြီးရဲ​တွေလာတဲ့အထိ​စောင့်​​နေပါတယ်​။ ဒါ့​ကြောင့်​ပဲစကြာဝဠာ ဗီလိန်​ကြီး Thanos ဟာ က​လေးတစ်​​ယောက်​​ကြောင့်​ jail​ အောင်းခဲ့ရရှာပါတယ်​။
သငျဟာ စူပါဟီးရိုးရုပျရှငျတှရေဲ့ပရိသတျဆိုရငျတော့ စူပါဟီးရိုးတှအေပွငျ နာမညျကွီးဗီလိနျတှကေိုလညျးကောငျးကောငျးသိမှာပါ။ဗီလိနျတှထေဲမှာမှ နောကျဆုံးထှကျရှိခဲ့တဲ့ Avengers:Infinity Warရဲ့ အဓိကဗီလိနျကွီး ကြှနျတျောတို့ကခဈြစနိုးနဲ့ မောငျသာနိုးလို့ချေါကွတဲ့ Thanos ကွီးကိုလညျး ပူပူနှေးနှေးကွညျ့ခဲ့ကွရမှာပါ။ဗီလိနျကွီးဆိုပမေယျ့ စကွာဝဠာဆကျလကျရှငျသနျဖို့ သတ်တဝါတဈဝကျကို ဖြောကျပဈခငျြခဲ့တဲ့ Thanos ကွီးကို ကြှနျတျောတို့အနနေဲ့ ဗီလိနျဟုတျရဲ့လား လူဆိုးဟုတျရဲ့လားလို့ဝခှေဲမရဖွဈကွပါတယျ။ဒီ Thanos ကွီးကို ဘယျသူတှကေအနိုငျရခဲ့ဖူးလဲ ၊ဖကျြဆီးခဲ့ဖူးလညျးဆိုတာလညျးသိခငျြကွမယျထငျပါတယျ။ဒီတော့ Marvel Timeline မှာ ဒီကောငျကွီးကိုအနိုငျရခဲ့တယျ့ ဖကျြဆီးနိုငျခဲ့တဲ့သူတှအေကွောငျးပွောပွပါရစေ။
Marvelရဲ့ စူပါဟီးရိုးတှမှော စှမျးအားကွီးမားတဲ့တူကွီးကိုပိုငျဆိုငျတဲ့ Thor ဟာ Thanos နဲ့သာ တဈယောကျခငျြးခခြဲ့ရရငျ အသကျရှငျနိုငျမှာသခြောပါတယျ။ဒါပမေယျ့တကယျတမျးမှာတော့ အသကျရှငျရုံတငျမကပဲ သူ့ရဲ့တူုကွီးနဲ့ Thanos ကွီးကိုမတျတပျတောငျမရပျနိုငျတော့အောငျ ကောငျးကောငျးအနိုငျယူခဲ့ဖူးပါတယျ။
Comicအရတော့ Thanos ဟာ infinity stoneတှကေိုလကျလြှော့လိုကျပွီး တဈခွားစှမျးအားကွီးအရာသုံးခုဖွဈတဲ့ The Chalice of run,the map of all endingနဲ့ the illumination stoneတို့ကိုရယူပွီး ပိုပွီးစှမျးအားကွီးလာဖို့ပါ။အဲ့အခြိနျမှာ Thorနဲ့တိုကျခိုကျရပွီး Thor က တဈယောကျခငျြးအလဲထိုးနိုငျခဲ့ပါတယျ။ဒါပမေယျ့Thor ဟာ Thanos ကိုအဆုံးမသတျခဲ့ပဲ မိနဈအနညျးငယျသကျညှာမှုပေးခဲ့ပါတယျ။ဒီအခြိနျအတှငျးမှာ Thorရဲ့ အဖဟော Thorကို ပိုအငျအားကွီးလာအောငျပွုလုပျနိုငျခဲ့ပါတယျ။
Infinity stoneတှနေဲ့လကျအိတျကွီးရဲ့ မူရငျးဇာတျလမျးအမြားစုမှာ Thanos ဟာ စူပါဟီးရိုးတှကေို အနှောငျ့အယှကျဖွဈစခွေငျး၊ပကျြစီးစခွေငျးသာဖွဈတာမို့ အားလုံးဂရုမစိုကျမိကွတော့တဲ့အခနျးတဈခုရှိပါတယျ။အဲ့ဒါကတော့ Thanos ကိုယျတိုငျ စူပါဟီးရိုးတှနေဲ့ပေါငျးပွီး Infinity Gauntletရရှိသှားတဲ့ သူ့ထကျကွောကျဖို့ကောငျးတဲ့ Nebula ကိုရပျတနျ့ဖို့ကွိုးစားခဲ့ခွငျးပါပဲ။
ပွောစရာကိုမလိုတာကတော့ဒါတှဟော Thanos ကွီးရဲ့အမှားတှကေနစေခွငျးပါပဲ။သူ့ရဲ့Gauntletကိုအသုံးပွုခဲ့ခွငျးဟာ Nebulaကိုမသစေခေဲ့တဲ့အပွငျ Nebulaရဲ့ရိရှဲနတေဲ့အလောငျးကွီးကို ခွလေကျတှလေိမျပိနျ၊အသားစိုငျတှလေောငျကြှမျးနတေဲ့ အသိစိတျလညျးပြောကျလုနီးပါးဖွဈသှားသူအဖွဈ ပွနျလညျအသကျဝငျစခေဲ့ပါတယျ။ပိုပွီးရကျစကျသှားတဲ့ Nebula ဟာ Thanos နဲ့တှတေဲ့အခါ Gauntletကိုဆှဲယူသှားပွီး Gauntletကိုလညျး စူပါဟီးရိုးတှေ၊လူကောငျးတှကေိုနှိမျနငျးဖို့အသုံးမပွုခဲ့ပဲ Thanos ကွီးကို စကွာဝဠာရဲ့အနကျဆုံးနရောတှဆေီ မြောပါစခေဲ့ပါတယျ။
1992မှာထှကျရှိခဲ့တဲ့ Infinity War comicဟာတော့ ၂၀၁၈ထှကျဇာတျကားနဲ့အမြားကွီးခွားနားခဲ့ပါတယျ။အဲ့comicရဲ့အစမှာ အဓိကဗီလိနျဟာ Thanos မဟုတျခဲ့ပဲ Infinity Stonesတှကေိုသုံးပွီး စကွာဝဠာကိုဖကျြဆီးခငျြတဲ့ The Magusပဲဖွဈပါတယျ။The Magusဟာ Adam Warlockရဲ့ အနာဂတျပုံပွောငျးဗားရှငျးတဈကောငျဖွဈပါတယျ။ Thanos ဟာ Infinity stoneတှအေပျေါအဓိကကြှမျးကငျြသူဖွဈတာကွောငျ့ The Magusဟာ Thanos ကွီးရဲ့ ကိုယျပှားတဈကောငျပွုလုပျပွီး သူ့အပျေါသစ်စာရှိတဲ့ လူယုံကွီးတဈကောငျဖွဈစပေါတယျ။အလားတူပဲ Marvelစူပါဟီးရိုးတှရေဲ့ လူဆိုးဗားရှငျးတှကေိုလညျးကိုယျပှားခဲ့ပါတယျ။ဒါ့ကွောငျ့ Thanos နဲ့ Adam Warlockတို့ဟာ Tha magusကိုယျပှားထားတဲ့ Thanos နဲ့ Adam Warlockတို့နဲ့တိုကျခိုကျခဲ့ရပါတယျ။The Magusဟာ ဇာတျလမျးတဈလြှောကျ သူကိုယျပှားထားတဲ့လူယုံတျော Thanos ကွီးကို သူ့ကြှနျလိုဆကျဆံခဲ့ပါတယျ။ကြှနျလိုရကျရကျစကျစကျဆကျဆံခဲ့တဲ့အခနျးတှလေညျးအမြားကွီးပါဝငျခဲ့ပါတယျ။ Thanos အစဈကိုပွုမူခွငျးမဟုတျပမေဲ့လညျး တကယျ့ဗီလိနျကွီးကိုလုပျခငျြတိုငျးလုပျပွနတောဖွဈလို့ တဈမြိုးထူးခွားခဲ့ပါတယျ။
Infinity Warရဲ့မူလဇာတျလမျးမှာအဓိကမေးရဲတဲ့မေးခှနျးကတော့ Thanos ထကျဘယျသူကွောကျဖို့ကောငျးလဲဆိုတာပါပဲ။ဇာတျလမျးအရ Thanos ဟာ စကွာဝဠာကိုတဝကျမကပဲ လုံးဝဖြောကျဖကျြခငျြနတေဲ့ Magus ကွီးကိုတားဆီးဖို့ Adam Warlockရဲ့ team နဲ့ပူးပေါငျးတိုကျခိုကျရပါတယျ။ဆိုးတာကတော့ Team ထဲမှာပါတဲ့ Drax နဲ့ Gamoraတို့ဟာ Thanos ကို သစေခေငျြတှသေူခညျြးဖွဈပါတယျ။
Adam Warlockရဲ့teamနဲ့ Thanos တို့တှဆေုံ့ခွငျးဟာ တောကျလြှောကျပူးပေါငျးခွငျးကိုမဖွဈစခေဲ့ပဲ တဈခါမှာတော့ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျသတျဖို့ဦးတညျခဲ့ပါတယျ။ Thanos ကွီးဟာစှမျးအားပိုကွီးပမေယျ့ Gamoraကတော့ ပိုမွနျတဲ့အတှကျ လကျဦးမှုရယူနိုငျသှားပွီး Thanos ရဲ့လညျခြောငျးရိုးကိုရကျစကျစှာထိုးနှကျပွီး အရိုးတှကြေိုးကာ အကွောသသေလိုဖွဈသှားစပေါတယျ။ဒီထိုးနှကျမှုကပဲ သူတို့သားအဖအခငျြးခငျြးအပွနျအလှနျလေးစားမှုရှိစပွေီး Thanos ကလညျး Gamora ရဲ့အစှမျးကိုပိုသဘောပေါကျခဲ့ပါတယျ။
စကွာဝဠာကိုတဈဝကျဖကျြဆီးပွီးခြိနျမှာတော့ Thanos ရဲ့နောကျဦးတညျခကျြက. Guardians of the galaxy တှပေါပဲ။ Gamoraဟာ သူ့ရဲ့ဓားဖွဈတဲ့ God Slayer နဲ့တောငျ Thanos ကိုမတားဆီးနိုငျတော့ခြိနျမှာ လြှို့ဝှကျလကျနကျတဈခုပဲကနျြရှိပါတော့တယျ။ အဲ့ဒါကတော့ Cosmic cubeပါပဲ။
Comic အရ Peter Quillသာ Cosmic Cube နဲ့ magus ကိုနောကျဆုံးတိုကျခိုကျခဲ့ပမေယျ့ Comic ဟာ Comic ထုံးစံအတိုငျး အလှညျ့တဈခုရှိပါတယျ။ Star-lord က magus ကိုတိုကျခိုကျမှုဟာ ကိုယျပှားတဈခုသာဖွဈပွီး Cosmic cube ကိုနောကျဆုံးတဈကွိမျအသုံးပွုလို့ရဦးမယျလို့သခြောစခေဲ့ပါတယျ။ဒီလိုနဲ့ Cosmic Cube ကို ကညျြဆနျအနနေဲ့ စှမျးအားအပွညျ့ရှိနခြေိနျမှာ Thanos အပျေါကိုပဈခတျတိုကျခိုကျလိုကျပါတယျ။ဒါ့ကွောငျ့ပဲ Thanos ဟာ စကွာဝဠာတဈခုလုံးကိုဖကျြဆီးဖို့ပွနျလာခဲ့ပါတယျ။
Thanos ဟာ သူ့ရဲ့အဖအေရငျးဖွဈတဲ့ Imperial Guardနဲ့ Imperial Guard ရဲ့အပေါငျးအပါတှဖွေဈတဲ့ Smasher, Oracle,Fang တို့နဲ့လညျးတိုကျခိုကျခဲ့ရပါတယျ။ Thanos ပငျပနျးလာခြိနျမှာ ဟိုဘကျကတိုကျခိုကျဖို့ပွငျလာတဲ့လကျနကျကတော့ Gladiator သနေတျကွီးဖွဈပါတယျ။The Guardian ဟာ Thanos ကိုတဈခကျြတညျးနဲ့အစိတျစိတျအမှာမှာကှဲစဖေို့ရညျရှယျခဲ့ပါတယျ။
၇။ Thanos ကိုအားလုံးနီးပါးအနိုငျယူဖူးကွပါတယျ
Thanos သာ Cosmic cubeကိုအသုံးပွု ပွီး သူ့ကိုယျသူအနန်တတနျခိုးရှငျဖွဈစခေဲ့ရငျ ပိုဆိုးမှာသခြောပါတယျ။ ဒါမှမဟုတျပဲ avengersတှနေဲ့ guardians of the galaxyတှကေို Cancerveseလို့ချေါတဲ့တဈခွား universe တဈခုကိုပို့လိုကျတယျဆိုရငျရော။အဆိုးကောအကောငျးကောတှဲနကေတော့ ဒီ Universe ဟာပို့ဆောငျခံရသူတှကေို မသကေောငျတှဖွေဈအောငျဖနျဆငျးနိုငျခဲ့ပါတယျ။
၁၉၉၁မှာ Thanos က ဖြောကျဖကျြခဲ့တဲ့ စကွာဝဠာအကွီးအကဲတှဟော Avengersတှကေိုပွနျလညျချေါယူပွီး လကျနကျအပွညျ့အစုံတပျဆငျကာတိုကျခိုကျစပေါတယျ။ Thanos ဆီမှာရှိနတေဲ့cosmic cubeကလညျး အမရေိကနျအစိုးရကပွုလုပျထားတဲ့ ပုံစံအတုကွီးဖွဈနပွေနျပါတယျ။ဒါ့ကွောငျ့စှမျးအားမရှိပဲ Avengersတှသောမက Marvel Timelineကစူပါဟီးရိုးအားလုံးဟာ Thanos ကိုဝိုငျးတိုကျခိုကျခဲ့ကွပါတယျ။
Infinity Gauntlet#4မှာတော့ Thanos အနနေဲ့ စူပါဟီးရိုးတှအေားလုံးကိုတဈယောကျတဈမြိုးစီပကျြစီးအောငျ ပွုလုပျအပွီးမှာ Capကကနျြနခေဲ့ပါတယျ။ Captain Americaဟာ Thanos ဆီကိုလြှောကျသှားပွီး မငျးရနျသူတှကေိုတိုကျခိုကျနိုငျနပေမေယျ့ဘယျတော့မှတကယျအနိုငျရမှာမဟုတျဘူးလို့ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။Captain Americaရဲ့သဘောကတော့သူသရေရငျတော့ Thanos ကွီးကိုပွောခငျြတာပွောရဖို့ပါပဲ။
ဒီနောကျတော့ Thanos ဟာ Capရဲ့အပွောကိုတှဝေသှေားပါတယျ။Adam Warlockနဲ့စကားပွောပွီးခြိနျမှာတော့ သူဟာ Gauntletကွောငျ့သာစှမျးအားကွီးမားနတောဖွဈကွောငျးနားလညျသှားပွီး သူ့ရဲ့ဒီသိမှုကပဲသူ့ကိုကရြှုံးစခေဲ့ပါတယျ။
စကွာသဠာကိုတဈဝကျဖြောကျဖကျြခငျြတဲ့ Thanos နဲ့ ပေါငျးခငျြတဲ့သူကောရှိပါ့မလား။ အငျး။တဈယောကျတော့ကနျြပါသေးတယျ ။သူကတော့ Deadpoolပါပဲ။Deadpoolဟာ သူ့ရဲ့ကိုယျက ထိခိုကျဒဏျရာရတိုငျးပွနျလညျဖွညျ့တငျးပွီး သှေးဖွညျ့နိုငျတယျဆိုပမေယျ့ မကျြနှာကိုတိုကျခိုကျခံရရငျတော့သစေနေိုငျပါတယျ။တဈခါမှာအဲ့လိုတိုကျခိုကျခံရလို့သမေလိုဖွဈသှားပွီး Deathနဲ့ဆကျဆံရေးတဈခုတောငျရရှိခဲ့ပါတယျ။
တဈခြိနျမှာတော့Death ဟာပွနျပေးဆှဲခံရတဲ့အခါမှာ စကွာဝဠာထဲကသူတှအေားလုံးဟာတကယျမသတေဲ့အခိုကျအတနျ့ကိုရရှိသှားပါတယျ။ဒါ့ကွောငျ့ Dead poolနဲ့ Thanos တို့ဟာပူးပေါငျးခဲ့ကွပါတယျ။ပွနျပေးဆှဲခံရတဲ့Death ဟာ Dead poolနဲ့သာဆကျသှယျလိုပွီးဆကျသှယျတဲ့အခါမှာလညျး Thanos ကိုဖကျြဆီးဖို့သာပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။
Dead poolရဲ့ အကူအညီနဲ့ Universe တဈခုလုံးကိုစူပါဟီးရိုးတှဖွေဈသှားစတေဲ့ Captain Universeဖွဈသှားစပေါတယျ။သူ့ရဲ့ Caltain uni-poolအနနေဲ့ပဲ Tharnosကိုစကွာဝဠာ Dimensionsတှကွေားမှာပိတျမိသှားစပေါတယျ။
၁၀။၁၉၇၀ comic က သာမနျကလေးငယျမြား
Spidey super storiesဆိုတာကတော့ Marvel နဲ့ လြှပျစဈကုမ်ပဏီတဈခုတို့ပူးပေါငျးရေးဆှဲခဲ့ခွငျးဖွဈပါတယျ။ ၁၉၇၀က ကလေးတှကေိုပညာပေးဖို့ရညျရှယျခွငျးလညျးဖွဈပါတယျ။ Spidy stories#39မှာတော့ Thanos ဟာ ကလေးတဈယောကျလကျကနေ cube ကို ရရှိဖို့ကွိုးစားရပါတယျ။
Thanos ဟာ စပိုကျဒါမနျးနဲ့တိုကျခိုကျရငျးငလငျြတဈခုကိုဖနျဆငျးခဲ့ပါတယျ။ ပညာပေးဇာတျလမျးသာဖွဈလို့ မူရငျး Thanos ကွီးလောကျ မကွမျးပဲအလှဲလှဲအခြျောခြျောပါပဲ။ ငလငျြကွောငျ့ သူ့လကျထဲကcubeဟာ လှတျကသြှားပွီး cubeကိုကောကျသှားသူကတော့စပိုဒျဒါမနျးမဟုတျပါဘူး။အသကျ၇နှဈအရှယျ စကိတျသမားလေး Speedy ပါပဲ။ Speedy ဟာ Thanos ကို သူ့အောကျကမွကျတှနေဲ့ခညျြနှောငျစခေဲ့ပွီးရဲတှလောတဲ့အထိစောငျ့နပေါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ပဲစကွာဝဠာ ဗီလိနျကွီး Thanos ဟာ ကလေးတဈယောကျကွောငျ့ jail အောငျးခဲ့ရရှာပါတယျ။
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ဝေဠုကျော်ကို ကာမလိမ်လည်မှုဖြင့် အလှမယ်သင်းသင်းက တရားရုံးတွင် ဦးတိုက်လျှောက်ထား